Nezvedu - Haining Chengda Machinery Co., Ltd.
Asa Paper Cup Midziyo Indasitiri Inotungamira Brand
Haining Chengda Machinery Co., Ltd. yakavambwa mugore ra 1998. Mumakore makumi maviri apfuura, Chengda mugadziri akasarudzika mupepa remidziyo yekugadzira michina. Yedu chigadzirwa mhando inovhara otomatiki bepa mukombe, ndiro, muvharo uye yakatwasuka chubhu inogadzira michina uye yekuongorora michina.
Nebazi rayo reR & D, Chengda ine tekinoroji inotungamira pamapepa zvigadzirwa zvigadzirwa. Kugara uchivandudza, mazano matsva uye zvinhu zvazvino uno zvinotungamira michina yeChengda kune yepasirese mhando yepamusoro. Dhipatimendi reR & D dhipatimendi, timu yekutengesa uye mushure mekutengesa timu, vanopa rese system sevhisi.
Kubva pane zvakaitika makore makumi maviri apfuura, Chengda inozivikanwa kwete chete kuChina, asiwo pasi rese. Michina yedu aivigirwa kuna USA, EU, Japan, pakati kumabvazuva uye Africa, nyika dzinopfuura zana.
Zvigadzirwa zvedu zvine mhando yakanaka uye kiredhiti kwatiri kuti tigone kumisikidza akawanda mahofisi ebazi nevanozvigovera kunze kweChina